Archive du 20171013
Ny Pesta tsy voafehy, TIKO no akatona
Na ny olona mpomba ny fitondrana HVM aza omaly hariva dia sanganehana hoe fa inona ity fanakatonana ny Tiko Andranomanelatra nandefasana miaramila mirongo basy ity. Eto Antananarivo anefa , efa lasa savorovoro isan’andro ny fifandroritana amin’ny razana voalaza fa matin’ny pesta, tahaka ny teny amin’ny hopitaly Befelatanana afak’omaly sy teny Mandrangombato I Anosibe omaly
Voahangy Rajaorimampianina Tsy hita popoka fa mitsoaka ny pesta
Ny 17 aogositra 2017 no hita niseho vahoaka farany teny Andralanitra ary niparitaka tamin’ny fampahalalam-baovao Ramatoa Voahangy Rajaonarimampianina. Ny fotoan-tsarotra mahazo ny Malagasy, toy ny vanim-potoanan’ny aretin-doza pesta ankehitriny no tena hilana ny vadin’ny filoham-pirenena amin’ny maha reny voalohan’ny Malagasy azy kanefa dia tsy re sy tsy tazana izy.
Vary 4300 taonina tamin’ny Sinoa Nanaovan’ny HVM bizina ?
Ny 19 jona no nandraisan’ny fanjakana Malagasy tamin’ny alalan’ny Filoha Hery Rajaonarimampianina ny vary an’arivony taonina avy amin’ny governemanta sinoa, ka ny Masoivohon’ity firenena ity Yang Xiaorong no nanolotra izany. Mahatratra 4300 taonina ny totalin’ireo azon’I Madagasikara.
Tsy nomen’ny fianakaviany ilay razana Sakoroka mandrak’alina teny Anosibe
Savorovoro tanteraka ny teny Anosibe Mandrangobato I nanomboka omaly tolakandro hatramin’ny alina. Anton’izany ny fisian’ny olona maty, izay nambaran’ny fianakaviany sy ny mpiara-monina fa maty vokatry ny fiakaran’ny tosidra, ary efa nandrasana roa andro tao an-tanàna ny razana.
Fanotofana tany eny Ampitatafika Ho fanitarana ny tanàn-dehibe
Anisan’ny raharaha iray mitana ny sain’ny maro hatreto ny asa fanotofana tany eny amin’ny tanimenabe ao anatin’ny kaominina Ampitatafika.
Savorovoro tao Mahajanga Nakatona vonjimaika ny oniversite
Mpianatra 5 naiditra hopitaly ary 5 voasambotra omaly noho ny gidragidra tao amin’ny oniversiten’i Mahajanga. Nifandona sy samy mpianatra avy amin’ny BDUM (Bureau des étudiant de l' Université de Mahajanga) sy ny CCE (Conseil Consultatif des Etudiants).